eToro ပွဲစားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2019 | ၏အကောင်းအဆိုး cons အကြောင်း Read eToro ပွဲစား - က ISO
ကျနော်တို့မှတ်သားကျေးဇူးပြုပြီးစတင်ခင်မှာ! CFDs ရှုပ်ထွေးတူရိယာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကြောင့်သြဇာမှလျှင်မြန်စွာပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူလာ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်အသစ်များ၏ 65% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။ သင် CFDs အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားပါနဲ့သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး၏မြင့်အန္တရာယ်ယူတတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသငျ့သညျ။ '] လက်လီ CFD အကောင့်အသစ်များ၏ 65% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။
အလည်အပတ် eToro ယခု
လက်လီ CFD အကောင့်အသစ်များ၏ 65% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။
တခုတခုအပေါ်မှာ account တစ်ခု register နှင့်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့မဟုတ်သူ eToro?
1 ။ စတော့ရှယ်ယာ
2 ။ CFDs
3 ။ ETFs
4 ။ Indicator
5 ။ ငွေကြေး
6 ။ ကုန်စည်
7 ။ Cryptocurrencies
1 ။ ဂရိတ် software နှင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများ
2 ။ အမျိုးမျိုး
3 ။ ရိုးရှင်းသောအလိုလိုသိ interface ကို
4 ။ သိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာရွေးချယ်စရာတစ်ဦးအမျိုးမျိုး
5 ။ လုံလောက်သောဖောက်သည်ထောက်ခံမှု
eToro cryptocurrency ကုန်သည်များအဘို့, အားနည်းချက်တွေလီမိတက် options များ
မည်သို့သည်အဘယ်မှာရှိ eToro based?
မည်သို့အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် eToro US မှာရရှိနိုင်ပါသည်မဟုတ်လော
ဆိုးကျိုးဘယ်လောက်ကြာကယူပါဘူး eToro ထုတ်ယူစီမံဆောင်ရွက်သလော
ငွေကြေးကိုကုန်သွယ်ဖိုရမ်များနေ့တိုင်းတက်ဖြတ်တောက်တဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျ, eToro တသမတ်တည်းအထုပ်၏ကျန်အထက်ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးရပ်နိုင်။
ပလက်ဖောင်းယနေ့န်းကျင်အကြီးမားဆုံး fintech ကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းမှာသူ့ဟာသူ prides နှင့်လူ Forex နှင့်ကုန်စည်ကုန်သွယ်တွေ့မြင်လမ်းကိုတော်လှန်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နေရာရာလမ်းတစ်လျှောက်, ကုမ္ပဏီလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအကြောင်းနားလည်တဲ့အသုံးပြုသူတစ်ဦးရောက်လာရန်ဦးဆောင်သည့်အစုစုကိုမှ cryptocurrency ကဆက်ပြောသည်။
ယခုအချိန်တွင်ယင်းကုမ္ပဏီသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများကမှတ်ပုံတင်ထားပြီးအဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု၏နည်းလမ်းရှာဖွေစူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းအစတှငျကြှနျုပျတို့မှာ In-depth ကိုကြည့်ယူသွားဖို့ရှိပါတယ် eToro နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကအမှန်တကယ်ဖောက်သည်များအတွက်ပါဘူး။
eToro (ဥရောပ) Ltd, တစ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလိုင်စင် # 109 / 10 အောက်ရှိဆိုက်ပရပ်စ် Securities Exchange ကော်မရှင် (CySEC) ကလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်။
eToro (ဗြိတိန်), Ltd, တစ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလိုင်စင် FRN 583263 အောက်ရှိဘဏ္ဍာရေးကျင့်အာဏာပိုင် (FCA) ကလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်။
eToro ဖြစ်ကာ Capital ကို Pty Ltd (သြစတြေးလျ Securities မှနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကခွင့်အာဏာရှိပါသည်ASIC) သြစတြေးလျဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလိုင်စင် 491139 အောက်မှာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး။ )
ထွက်ရှိလူများ၏အဖြေတွေအများကြီးသာမှတ်မိနိုင် eToro cryptocurrency ကုန်သွယ်၏အခြေအနေတွင်မှ။
သို့သော်ဒီကုမ္ပဏီရှည်လျား cryptocurrency ပင်မသို့ခရီးကိုဖန်ဆင်းဤနေရာတွင်ခဲ့တာမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ပထမဦးဆုံးအ cryptocurrency, Bitcoin, သာ, 2009 အတွက်, ပြီးတော့နေဖြင့်တည်ရှိသို့ကြွတော်မူ eToro နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်န်းကျင်ခဲ့သည်။
၏အစ eToro တီထွင်သူလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသုံးမယ့်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖွဲ့စည်းရန်စုဝေးသောအခါ 2007 ပြန်ခြေရာကောက်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်မသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့တည်နေရာများနှင့်ကုန်သွယ်တူရိယာသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ဘယ်ကုန်သည်ကအသုံးပြုနိုင်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့အွန်လိုင်းစျေးကွက်တည်ထောင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကြည့်ရှုပါ, အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့, လွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒတွေးခေါ်အမြဲသူတို့အစိုးရထိန်းချုပ်မှုလွတ်လပ်သောလျှင်စီးပွားရေးသာရှင်သန်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်ကြ၏, ဤအယူအဆ၏ကြင်နာရှေ့ဆောင်ဖြစ်ပါသည် eToro စိတျထဲတှငျခဲ့ကြပုံရသည်။
အစအဦးမှာ, eToro တော်တော်လေးရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူသောအညွှန်းဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အပြန်အလှန်က်ဘ်ဆိုက်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစကုန်သည်များစျေးကွက်ပုံစံများကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်သူတို့ကနေအကျိုးခံစားရဖို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းများအပေါ်မှနျးသုံးနိုင်တယ်လို့ဂရပ်များ၏ပဒေသာ featured ။
အပြင်ကနေ, ဆိုက်မှာလည်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အရေးကြီးပါသည် tools များများစွာပေးခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ 2009 တဝိုက်သို့ရောက်လာသည်ကား, eToro ပြောင်းလဲမှုအတော်များများလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ, သူတို့က Web Trader, သူတို့ရဲ့သီးခြားကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့် tools တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အမျိုးမျိုးကုန်သည်များ enabled သောကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါဤအဖြစ်ပါတယ်။
2010 အားဖြင့် post-2011, eToro မုန်တိုင်းအားဖြင့်လောကဓာတ်ကိုယူဖို့အဆင်သင့်ပဲ, ဒါကြောင့်အတိအကျ, ကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးလူမှုရေးကုန်သွယ်ဖိုရမ်ဖြန့်ချိ, သောလြောကျပတျစှာအမည်ရှိ OpenBook ကိုပြု၏။
ဤသည်သာတစ်ဦး fintech startup အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော Facebook နှင့် Instagram ကိုအဖြစ်လူမှုရေးကွက်လပ်၏လျင်မြန်စွာပြန့်ပွားတုံ့ပြန်ရန်စုံလင်သောလမ်းခဲ့ eToro ကုန်သည်များနှင့်ပွဲစားများတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူမှုရေးပလက်ဖောင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြစျေးနှုန်းများ; လက်ရှိစျေးကွက်စျေးနှုန်းအပေါ်ပြသ eToro ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း။ အတိတ်စွမ်းဆောင်ရည်အနာဂတ်ရလဒ်တစ်ခုအရိပ်အယောင်မဟုတ်ပါဘူး။ တင်ပြအဆိုပါကုန်သွယ်သမိုင်းထက်နည်း5အသက်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်များများအတွက်အခြေခံအဖြစ်လုံလောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီ post ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကွံဉာဏျမဟုတ်ပါဘူး။
စောစော 2012 အဖြစ် eToro ငွေကြေးနှင့်ကုန်စည်အတွက်အစဉ်အလာအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, သို့သော်ဤမကြာမီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယာဉ်များအဖြစ်စတော့ရှယ်ယာများ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုသာ။
2013 များအတွက်အရေးပါသောတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည် eToro အကြောင်းရင်းနှစ်ခုသည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်နှစ်ခုလုံးကို Android နှင့် iPhone အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သောပလက်ဖောင်းတစ်မိုဘိုင်း app version ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဤအဖွင့်ချိန်မှာသူတို့နှငျ့အတူလှည့်ပတ်သူတို့ရဲ့စျေးကွက် '' သယ်ဆောင်ရန်လိုသူစမတ်ဖုန်းအကြောင်းနားလည်တဲ့ဖောက်သည်များ၏နက်ရှိုင်းကောင်းစွာသို့အသာပုတ်ပါခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ မဟာဗျူဟာအဖြစ်, ဒီအဘို့အ resoundingly အမြင်သက်သေပြ eToro ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပလက်ဖောင်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တိုးမြှင့်အဖြစ်။
တူနှစျတှငျ, eToro အဆိုပါ Bitcoin တပ်ကမ္ဘာကြီးကိုဆုတ်ထားတာခံခဲ့ရပါတယ်ရုံအချိန်ပတ်လည် cryptocurrency သို့ delve ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကုန်သည်ကြီးများယခု Difference များအတွက်စာချုပ်များ (CFDs) ၏နည်းလမ်းဖြင့် Bitcoin အတွက်ကုန်သွယ်မှုနိုင်ဘူး။ 2015 လာကြ, eToro နောက်တဖန်ပြောင်းလဲမှုများမြည်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိအင်တာဖေ့စကုန်သည်များယခုတိုင်အောင်မတူနိုင်တဲ့ပုံရိပ်ယောင်အဖြစ်ခြုံငုံတိုးတက်လာသောအလိုလိုသိအတွေ့အကြုံကိုပေးခြင်း, တစ်ချိန်ကပိုပြီး updated ခဲ့သည်။ 2016 ပညာရှင်ပီသစွာ related အတန်းသို့ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝေကြောင်းတွင်လည်းစီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသော CopyFunds ၏တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။
အယ်လ်သည်ဤအပြောင်းအလဲများမကြုံစဖူးစိစစ်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် eToro finesse နဲ့စိစစ်ကိုက်ညီဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏ access ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာ 100 နိုင်ငံများတွင်ကျော်ဖို့ယောင်ပြီးအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလန်းလာသောအသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းထားရှိရန်ခဲ့ရသည်။
2017 ၏အစမှာ, eToro ပလက်ဖောင်းအတွင်း cryptocurrencies ၏နံပါတ်ကုန်သွယ်မှုအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ယခုဤ, crypto နိူးသူတို့ရဲ့အသိပညာမူတည်ပြီးလို့ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ eToro ကမ္ဘာတဝှမ်း 170 နိုင်ငံများမှအသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ခြင်း, ကုန်သွယ်အာကာသအတွင်းလှသောရေပန်းစားသည်။
အစောပိုင်းကညွှန်ပြသည့်အတိုင်း, eToro ကမ္ဘာတဝှမ်း 170 နိုင်ငံများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့နှစ်သက်သောအဖြစ်သူတို့အားနိုင်ငံများမှအသုံးပြုသူများလာနှင့်သွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီအဘယ်သူ၏နေထိုင်သူများကြောင့်ကွဲလွဲကုန်သွယ်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းမူဝါဒများမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုမထားနိုင်ငံများစာရင်းကိုပေးသည်။
တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန် eToro အကောင့်, သင်သာသင့်ရဲ့အီးမေးလ်, Google Plus သို့မဟုတ် Facebook အကောင့်များအသုံးပြုမှုလိုအပ်ကြောင်းညွန်ပြချက်များကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့် setting ပြီးနောက်သင်ချက်ချင်းအကောင့် features တွေများစွာရယူသုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
သင်တို့သည်လည်း $ 2000 ၏ညှိဖို့ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ရုပ်သိမ်းခံရဖို့ကဤထုပ်ဘို့, သင်ဖောက်သည်ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်။
သင်၏ ID ထုတ်ဝေမယ့်တိုင်းပြည်ထဲကနေလျှင်သင့်ရဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကတ်မိတ္တူပေးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
သူတို့အားစာရွက်စာတမ်းများ scan ဖတ်ပြီပြီးနောက်, သငျသညျမြားကိုလညျးနေထိုင်ရာအထောက်အထားပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဤတွင်, သင်သာတစ်ဦးမကြာသေးခင်က utility ကိုဥပဒေကြမ်း၏မိတ္တူတင်ပြလိုပါတယ်။
If eToro သငျသညျတခု uncharted ပိုင်နက်တင်ဆက်, သင်သည်သင်၏သွားများဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းသရုပ်ပြအကောင့်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့နောက်သင်, စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုပေ။
အောက်တွင်သင်တို့အပေါ်မှာစတော့ရှယ်ယာဝယ်နိုင်ဘယ်မှာထံမှဖလှယ်မှုများ၏တစ်ဦး updated စာရင်းဖြစ်ပါတယ် eToro;
eToro သငျသညျ 1,000 CFDs ထက်ပိုမိုအပေါ်ကုန်သွယ်ရွေးချယ်စရာမှရယူထောက်ပံ့ငွေ။ ဒါကတစ်ခုအတိအကျနက္ခတ္တဗေဒအရေအတွက်ကမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာအခြားသူများကထွက်ကကမ်းလှမ်းဘာစဉ်းစား, အကောင်းတစ်ဦး၏ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ် 83 ETF ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် eToro။ သငျသညျသငျ၌ရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်သောအရာကိုကြည့်ယူနိုင်အောင်သူတို့ကအုပ်ကြွပ်အတွက်ထွက်ချထားပါပြီ။ အဆိုပါ ETF အုပ်ကြွပ်၏အချို့တစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
ဒါကစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင်အကြီးဆုံးညွှန်းကိန်းတစ်ခုစုဆောင်းမှုအဖြစ်ဒေါ်လာအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်အုပ်စု 13 ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။
ဤအပေါ်ပိုပြီးသွားရောက်ခဲ့ပြီးဒေသများ၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည် eToro ပလက်ဖောင်း။ အပေါ် FX eToro CFDS ၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်အထဲကယူသွားတတ်၏။ စုစုပေါင်း 47 ငွေကြေးအားလုံးရှိပါတယ်။
အဆိုပါကုန်စည်အပိုင်းထိုကဲ့သို့သောကြေးနီ, ရွှေ, ငွေ, ရေနံ, Natgaz, ပလက်တီနမ်အဖြစ်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူသငျသညျပေးပါသည်။
အစောပိုင်းကညွှန်ပြသည့်အတိုင်း, eToro CFD လွှမ်းခြုံနှင့်အတူ crypto အတွက်ကုန်သွယ်ရေးခွင့်ပြုစတင်ရန်အဲဒီမှာထဲကအလွန်ပထမဦးဆုံး CFD ပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အစစ်အမှန် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုသည်နောက်ကျပလက်ဖောင်းမှထည့်ပြီးပါပြီ။ သင်၌ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်,
Bitcoin, Bitcoin CashBitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, ဂယက်ထ, Litecoin, Dash, ကြယ်, EOS, Neo, Mitota, ZCACH နှင့် Binance အကြွေစေ့။
အပေါ် Depositing ပိုက်ဆံငွေကြေးထောက်ပံ့ eToro လွယ်ကူသည်။ ဘဏ်လွှဲပြောင်း, Yandex, Neteller, ဗီဇာ, မာစတာကတ်, ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်း, WebMoney UK နှင့် Skrill ရုံကုန်သည်များမှရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိပါသည်။
သင်သည်ထိုအဘို့ကိုထုတ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သို့မှသာကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုများ, ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများနှင့်ကန့်သတ်ရလိမ့်မည်။ ပိုက်ဆံဆုတ်ခွာ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကပုံစံဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ခဏစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်အဖြစ်အနည်းငယ်ပို hectic ဖြစ်ပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဆုတ်ခွာနည်းလမ်းများအကြွေး / debit card ကိုသို့မဟုတ်ဘဏ်လွှဲပြောင်းဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ eToro ကုန်သွယ် software ကိုတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းကိုရွှေစံသည်နှင့်လွယ်ကူသောအရောင်းအအားမရစေ features တွေတစ်ခုခင်းကျင်းနှင့်တကွကြွလာ။ ထို့အပြင်အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဂရပ်ဖစ်ကုန်သည်များယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုအဆင့်ပေးခြင်း, တိကျမှန်ကန်မှုကိုဦးတည်အတိုင်းအတာအတိမ်းစောင်းဆိုက်အားဖြင့်ထွက်ထားတော်မူ၏။
eToro သင်သည်သင်၏အစုစုအတွက်ထုတ်ကုန်များ၏တစ်ခုလုံးအများကြီးရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုနှင့်အစဉ်အမြဲကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်၏။ သငျသညျပြန့်ပွားအန္တရာယ်ကူညီပေးသည်မူသောသင်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမျိုးစုံဖို့အခွင့်အလမ်း, get ။ အမြည်းဖို့ပါးရည်နပ်ရည်ကုန်သည်များအတွက်စျေးကွက်တွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ eToro ပလက်ဖောင်း navigate နှင့်နားလည်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဤသည်ကွန်ပျူတာအကြောင်းနားလည်တဲ့အဖြစ်ဝါရင့်ကုန်သည်တွေမဖြစ်စေခြင်းငှါ, သောသူတို့အဘို့နေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ်။ လူတိုင်းအချိန်ကုန်သက်သာခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုံးစံ၌အရောင်းအစီရင်ဖို့ရရှိသွားတဲ့။
eToro သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်တစ်ခုချဉ်းကပ်ရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြု, ရွေးချယ်မှုများများစွာဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။ သငျသညျ, သို့သော်, ရရှိနိုင်တဲ့ချဉ်းကပ်မှု၏အသီးအသီးမှသက်ဆိုင်စည်းကမ်းချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်ယူသင့်ပါတယ်။
eToro (ဖုန်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောခန်း, ထောက်ခံမှု ticker မှတဆင့်) ရရှိနိုင်အေးဂျင့် 24 နာရီတစ်ရက်,6ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်နဲ့တက်ကြွနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုစနစ်, ရှိပါတယ်။ ကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အပေါ်တစ်ဦးဖမ်းသို့မဟုတ်ရှာကြံရှင်းလင်းချက်များမှာလျှင်ဒီနေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကုန်သွယ်မှုများအတွက် cryptocurrency ရွေးချယ်စရာလက်တဆုပ်စာကိုဆက်ကပ်မနေစဉ်, စာရင်းကိုအနိုင်နိုင်လုံလောက်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ထွက်အဲဒီမှာယုံကြည် cryptocurrencies ရာပေါင်းများစွာနှင့်များစွာသောကုန်သည်များတိုးချဲ့ crypto တွင်လည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများလိုလားရှိပါတယ်။
စဉ် eToro လက်လှမ်းနေဆဲကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency နှင့်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်, အမေရိကန်ဖြစ်ခြင်းအရှိဆုံးထူးဆန်းသောချိုတဦး၏အချို့သောချို့တဲ့ရသောအမှုသည်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်တစ်ဦးရှိနေခြင်းသေချာစေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
ညီအစ်ကိုများ Ronnen နှင့် Yoni Assia နှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦး, ဒါဝိဒ်သည် Ring ကို။
မရှိကော်မရှင်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာသျောလညျးသငျနေ့ချင်းညချင်းအခကြေးငွေ, ဆုတ်ခွာအခကြေးငွေနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအခကြေးငွေပေးချေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏တိကျတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဆွဲဆောင်အခကြေးငွေများ၏ကြင်နာကိုသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အကောင့်ကိုသို့မဟုတ်သို့သော် website တွင်အခကြေးငွေသိုက်ကသူတို့ရဲ့နိုင်ပါတယ်စရာစွဲချက်ရှိပါတယ်။
ငွေကြေး: $2စတော့အိတ်နှင့် ETFs: $ 2017 Cryptocurrencies: $ 4,000 Commodities နှင့် Indicator: $ 500 နိမ့်ဆုံးကုန်သွယ်အရွယ်အစားအပေါ်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ် 200 ဧပြီလ 2,000 ပြီးနောက်သူကိုဖောက်သည်များအတွက် (သြဇာရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကို x) ထိတွေ့မှုအပေါ်အခြေခံသည်
"Highly ဘို့အကြံပြု eToro"
eToro (အကောင့်လိုက်နာနှင့်ရရှိနိုင်ပါကငွေဖြစ်ပါသည်လျှင်) ရရှိသောတစ်ရက်အတွင်းထုတ်ယူ။
ထိုအခါကငွေပေးချေမှု၏နည်းလမ်းရောက်ရှိဖို့5စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ကအထိကြာနိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းဆယ်စုနှစ်အတွင်း eToro တသမတ်တည်းအဆိုပါ fintech ကဏ္ဍပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခဲ့ကြောင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာအသံရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
သတငျးကောငျးကိုသင်ဆဲအခုအချိန်မှာ site ပေါ်တွင်တက်ကြွကုန်သည်များ၏သန်းပေါင်းများစွာသော join နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
eToro စတော့ရှယ်ယာနှင့်အ cryptoassets အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအဖြစ်ကုန်သွယ် CFD ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ဦးစလုံးကမ်းလှမ်းသော Multi-ပိုင်ဆိုင်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
CFDs ရှုပ်ထွေးတူရိယာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကြောင့်သြဇာမှလျှင်မြန်စွာပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူလာသတိပြုပါ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်အသစ်များ၏ 65% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။ သင် CFDs အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး၏မြင့်အန္တရာယ်ယူတတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသင့်ပါတယ်။
ဤအကြောင်းအရာကိုသာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထောက်ခံချက်စဉ်းစားမရသင့်ပါတယ်။ Cryptoassets အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောကိုစည်းကမ်းတရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမအီးယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
Tags: etoro ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်, etoro crypto ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, etoro Forex ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်, ရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ဘယ်လို etoro?, etoro ပြန်လည်သုံးသပ်, etoro ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းပြန်လည်သုံးသပ်, etoro ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, etoro ဆုတ်ခွာပြန်လည်သုံးသပ်, Forex etoro ပြန်လည်သုံးသပ်, ဘယ်လို etoro အလုပ်မ, etoro အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံ, Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, etoro ဘာလဲ, etoro ကုန်သွယ်ကားအဘယ်သို့, etoro ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘာလဲ, etoro webtrader ဘာလဲ
လူး - စက်တင်ဘာလ 11, 2019 @ 17: 01
una maquina က de hacer perder dinero ESA plataforma, မြက်ပင် Que usar ပွဲစားများ serios ။
မစ္စတာ - ဇန်နဝါရီလ 6, 2020 @ 06: 23
Hiểnthịcác con số mua ưu tm khóhiểu .. !
18 - တဆယ်ခြောက် =
သုံးသပ်ချက်များ:2အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Created: အောက်တိုဘာလ 10, 2018